Budata GFX Tool for PUBG APK maka Android
Budata GFX Tool for PUBG
Free Budata maka Android (3.40 MB)
Budata GFX Tool for PUBG,
Ngwá ọrụ GFX bụ mmemme mmalite egwuregwu na nkwalite egwuregwu maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo. Ọ bụrụ na ekwentị gam akporo gị na-enwe ihe isi ike na egwuregwu mkpanaka nwere eserese dị elu dị ka PUBG, ị nwere ike dozie nsogbu na-ajụ oyi na nsụ site na ịhazigharị ntọala eserese.
Budata ngwa GFX maka PUBG gam akporo
Ọ bụrụ na ekwentị gam akporo gị dị ike, mana ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu dị ka nwayọ nwayọ, na-ajụ oyi, fps dara na egwuregwu, ọkachasị egwuregwu eserese dị elu, ana m akwado GFX Ngwá Ọrụ. Ngwa GFX bụ ngwa efu na-enye gị ohere ịhazi eserese egwuregwu ahụ nke ọma (ụfọdụ egwuregwu dị ka PUBG) iji weghara ihe onyonyo mara mma yana ezigbo egwuregwu.
Budata PUBG Mobile Lite
Site na ịsị budata PUBG Lite, ị nwere ike banye ozugbo na ụdị PUBG akwadoro maka ekwentị niile. PUBG Mobile Lite (APK) bụ ụdị dị mfe nke PUBG Mobile, ihe ntanetị kacha ebudatara,...
Budata PUBG PUBG bụ egwuregwu royale nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na kọmputa Windows na mobile. Na PUBG, nke na - eme ka ọnụọgụ ndị egwuregwu na ekwentị na PC na - abawanye...
Ọ na-enye ọtụtụ atụmatụ bara uru dị ka ịgbanwe mkpebi na ngwa GFX, eserese HDR na imeghe FPS, njikwa zuru oke na mgbochi mgbochi na onyinyo, na ndị ọzọ. Ọ dịkwa mfe iji; Mechie egwuregwu ahụ tupu ịmalite ngwa GFX. Họrọ ụdị egwuregwu gị. Hazie eserese dị ka ọchịchọ gị na ngwaike ngwaọrụ gị siri dị. Pịa nabata wee gbaa egwuregwu mgbe emechara mgbanwe niile.
GFX Tool for PUBG Ụdịdị